Ukuzithoba kukaMchunu yikho okumenza athandeke - Impempe
Ukuzithoba kukaMchunu yikho okumenza athandeke
“Sho mfwethu ungangifonela ngemuva kuka-2.”
“Ngijima ngo-9 mfwethu kodwa singakhuluma emini ngo-1.”
“Okay akunankinga mfwethu ngizokwenza kanjalo.”
Lezi yimpendulo ozithola uma ucela ukukhuluma nomshayisibhakela waseNingizimu Afrika uThabiso “The Rock” Mchunu. Njengezintatheli sihlangabezana nezinhlobo ezehlukene zabantu ikakhulukazi laba asebephumelele empilweni.
Kukhona abakubambisa udonga bathi: ngicela ungithinte ngemuva kwemizuzu engu-30. Uyothi usumthinta akasalubambi ucingo noma useluvalile. Omunye avele akhwele adilike kuwena ube ucela ukukhuluma naye njengentatheli, ungezile ngokulwa. Babodwa abavele bakubuze imibuzo ungakaqali nokuchaza ukuthi ufisa ukhuluma ngani. Uzibonele nje ukuthi le mibuzo ihambisana nokukweya wena njengentatheli.
UThabiso Mchunu ekalwa isisindo ngaphambi kwempi yakhe eRussia
Ngeke uzithole zonke lezo zinto kuMchunu okumele ngabe uyazikhukhumeza ngokuthi izinto zihamba ngendlela afuna ngayo kwezamankomane. Mhlawumbe yingoba lo mshayisibhakela wafundiswa ukuthi impumelelo yakhe ilele khona ekutheni angizikhukhumezi aphinde ahloniphe abezindaba.
U-The Rock ubukeka eya kude ngoba uyazimisela ngento ayenzayo nanekhono layo – ukushaya isibhakela. NgoMashi 27 lo mshayisibhakela ongowaseCato Ridge ngokudabuka, wehlule u-Evgeny Tishchenko waseRussia nokuyinto ayeyitshele impempe.com ukuthi uzoyenza vele. Wayengasho lokhu ngoba eyeya le nsizwa yaseRussia kodwa wayegcwele ukuzethemba ngoba azi ukuthi usebenza kanzima ejimini, futhi ezazi ukuthi uphokophele kuphi.
“Yena ungumuntu osaziyo isibhakela kodwa angimboni ezonginika inkinga ukuthi ngihluleke ukumshaya. Hhayi, angimboni nakancane…nginezimpi eziningi kunaye, usenezimpi ezincane eziyisishiyagalolunye. Izinto eziningi zivuna mina kodwa lokho akusho ukuthi impi kumele ngiyithathe kancane ngoba uwumuntu osaziyo isibhakela,” usho kanje uMchunu ekhuluma ne-impempe.com ngaphambi kokulibangisa eRussia.
Ukungaziphakamisi kukaMchunu kuhle kakhulu kodwa kuyahlaluka ukuthi lokho akakuphambanisi nokuzethemba akudingayo ukuze afinyelele esicongweni lapho efuna ukuya khona. Akungoba izinto zihlezi zihamba kahle zonke kuMchunu ngoba useke waba sesimeni lapho abuyiseleka khona emuva kwakufunayo, eshaywa ngu-Ilunga Makabu ngo-2015 empini eyayiseThekwini.
Abaningi babebona sengathi uMchunu ngeke esavuka azithathe ngoba kwakungalindelekile ukuthi ashaywe ngomngqimuzo womlalisa phansi kule mpi. Nokho akalilahlanga ithemba, waqhubeka nokwenza into ayithandayo nakholwa ukuthi usazoqopha umlando kuyona ngokuwina amabhande omhlaba uma ezimisela futhi engabheki emuva.
Ukuwina kukaMchunu eRussia kumbeke ethubeni lokulwela ibhande leWBC Gold elihlonishwayo emhlabeni. Ngendlela azibeke phansi nazimisela ngayo, unethuba elihle lokufinyelela esicongweni lapho ephokophele khona.
Previous Previous post: IChiefs ingashaya noma yiliphi iqembu – Kambole
Next Next post: Uncoma umvuzo wokuzikhandla owaMaZulu